genius's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Blog Posts (1)Discussions (1)EventsGroups genius's Likes Genius's Friends
genius has not received any gifts yet
စင်္ကာပူရောက်နေသော (သို့) စင်္ကာပူလာရန်ရည်ရွယ်ထားသော သူငယ်ချင်းများအတွက်
Posted on August 19, 2009 at 5:24pm7Comments
စင်္ကာပူရောက်နေသော (သို့) စင်္ကာပူလာရန်ရည်ရွယ်ထားသော သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို
www.mysing.ning.com မှ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
စင်္ကာပူမလာခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်များ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ လူနေမှုဘ၀ပုံစံများ၊
အခြားသော အထွေထွေဗဟုသုတများ၊ ရသစာပေများ အစရှိသည်တို့ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စင်္ကာပူရောက် သူငယ်ချင်းများနဲ့လည်း အလွယ်တကူတွေ့ဆုံနိုင်ပါတယ်။ AddaBlog Post
At 5:18pm on September 5, 2009, kyaw said… စ ရောက် သူငယ်ချင်းရဲ့ mail ကkhinmoemoeaung@google.mail ကို ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ At 12:56pm on September 3, 2009, Nan Say said… Friend!! Is it easy to get job at Singapore asaWeb Designer Post.? No comments yet!